Ny malalako ihany aho fianakaviana sy ny namana | Apg29
Ny malalako ihany aho fianakaviana sy ny namana
Aza mino fa vahiny tonga ka nitondra anay. Tsy marina izany.
Izany Mivezivezy "namela taratasy" USA. Ny taratasy ny handefa ny havan-tiany izay tsy ny Kristianina mba hahatonga azy ireo hahazo ny fahalalana ny ho avy andro ny fampakarana mety hitranga. No nandraisako taratasy ity avy amin'ny mpamaky izay efa nadika ho amin'ny teny soedoa fa Izaho no hamoaka azy eto.
Ny malalako ihany aho fianakaviana sy ny namana.
Ny vaovao irahiko dia momba ny fampakarana ny fiangonana izay mino amin'ny foko manontolo aho efa antomotra.
13. Fa tsy nety, ry rahalahy, mba ho fantatrareo ny momba ireo izay efa nodi-mandry, mba tsy hahalahelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana.
14. Fa raha inoantsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nodi-mandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy.
15. Fa izao no hilaza aminareo ny tenin'ny Tompo: isika, izay velona ka mbola mitoetra ho amin'ny ho avy 'ny Tompo, na inona na inona dia tokony ho tonga eo anatrehanao ireo izay efa nodi-mandry.
16. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny baiko fiantsoana sy ny feon'ny arikanjely ary ny trompetran'Andriamanitra antso 'Andriamanitra, ary aloha ny maty ao amin'i Kristy no hitsangana.
17. Avy eo isika, izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsena ny Tompo any amin'ny habakabaka. Ary toy izany foana isika, dia ho any amin'ny Tompo.
18. Koa mifampahery amin'izany teny izany.
Ao fa vetivety, toy 1/40 ny faharoa, ireo izay nitolo-batana ny fiainany ary nandray an'i Jesosy Kristy ho Tompo sy Mpamonjy hanjavona avy amin'ity tontolo ity, ary izany no hitranga amin'ny fotoana rehetra. Ahoana no ahalalanao izay tena fa ianao va no hovonjena?
Romana 10: 9-10
9. Fa raha manaiky amin'ny vavanao ianao fa i Jesosy no Tompo sy mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana Azy tamin'ny maty, dia hovonjena ianao.
10. Fa amin'ny fo ny finoana dia fahamarinana, ary amin'ny vava fibabohana no hovonjena.
Ny fandehanana any am-piangonana, hanompo ka manaova soa, dia tsy hahavonjy anao. Ianao nefa tsy voavonjy amin'ny alalan'ny asa tsara, dia voavonjy ianao mba hanao asa tsara. Mba ho "tsara ny olona" tsy hamonjeko anareo. Tsy maintsy manokana manaiky an'i Jesosy ho Mpamonjy. Misy andinin-teny be dia be momba izany. Betsaka aminareo no efa nandre ny momba ny fampakarana "Fisandratana" ary ny sasany aza nieritreritra na niteny hoe: "Raha izany no mitranga dia hibebaka sy hiverina Kristy".
Aleo hotantaraiko izay no efa akaiky hitranga amin'ny hoavy tsy ho ela indrindra. Raha ny Baiboly milaza fa tsy fantatsika ny andro sy ny ora, dia mazava fa manaiky ny vanim-potoana isika ary isika ao amin'ny fotoana farany amin'ny faran'ny izao andro izao. Tsy ho ela, ny mpino marina hakarina "hasandratra".
Sary an-tsaina, raha sitrapony, fa na an-tapitrisany mihitsy aza ny olona arivo tapitrisa nanjavona tsy ho ambonin'ny tany. Fiaramanidina nianjera, lozam-piarakodia, ny vehivavy bevohoka rehetra, tsy misy intsony, satria ny ao am-bohoka bevohoka ankizy keriny be korontana.
Rehefa mitranga izany, dia fantatrareo fa ny "fampakarana" no nitranga, ary efa tavela. Aza mino fa vahiny tonga ka nitondra anay. Tsy marina izany.
Fa mbola misy fanantenana. Voalohany ... Aza misy filazana na inona na inona eo amin'ny handriny na amin'ny tànany na inona na inona. Raha manao izany ianao, dia tsy azo vonjena sy ho very mandrakizay.
Ary ny zavatra handeha izy. Antikristy ho avy an-tsehatra, ary miseho ho tsara noho ny fanampiany mba hahatonga ny zava-drehetra tsara indray. Izy no hanamarina ny fifanekem-pihavanana tamin'ny Isiraely, ary fiadanana ho an'izao tontolo izao nandritra ny fotoana fohy. Ho famitahana lehibe nandritra ny telo taona sy tapany alohan'ny fahoriana lehibe ny telo taona sy tapany. Ny iray manontolo fahoriana fito-taona ... izay ho mahatsiravina.
Hitolo-batana ny fiainanao amin'i Jesoa Kristy ankehitriny. Manaiky azy ho Tompo sy Mpamonjy. Izany no hany fanantenana. Indrisy anefa, ianao angamba ho notapahin-doha raha misambotra anareo, kanefa tsy maintsy mety mandray ny mariky ny bibi-dia, na na inona na inona, dia mandany mandrakizay any amin'ny helo. Izany no tena lehibe.
Antikristy dia izao tontolo izao mampihatra ny filaminana sy ny mariky ny bibi-dia. Tsy ho afaka hividy na hivarotra tsy misy io marika. Mafy aho mino fa ny marika mety ho RFID poti eo amin'ny handriny na ankavanana, na tombokavatsa na inona na inona izay tsy mihetsika. Izaho koa mino fa dia hanova ny ADN. Toy ny Nefilima, grefy ny anjely lavo sy ny vehivavy avy amin'ny Genesisy toko faha-enina nanova ny DNA. Mariky ny bibi-dia hanao toy izany koa.
Ny Vatikana i Losifera dia manana tetikasa / teleskaopy tao amin'ny tendrombohitra Graham any Arizona izay efa nifandray tamin'ny vahiny nitatitra sampam-pitsikilovana. Tsy vahiny izy ireo. Tsy misy firenena hafa. Anjely lavo izy ireo.
Raha tsy manaiky an'i Jesosy dia aoka ho faty, dia mandany mandrakizay any amin'ny helo. Ary raha maka ny mariky ny bibi-dia, ianao voaozona mandrakizay tsy misy fanantenana. Ho mandany mandrakizay any amin'ny helo.
Fa raha manaiky amin'ny vavanao ianao fa i Jesosy no Tompo sy mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana Azy tamin'ny maty, dia hovonjena ianao.
Fa amin'ny fo ny finoana dia fahamarinana, ary amin'ny vava fibabohana no hovonjena.
Minoa an 'i Jesoa. Manaiky ny fanomezana maimaim-poana ny famonjena. Mangataka sy mandray an'i Jesosy ankehitriny.
Anontanio zavatra toy ny:
"Jesosy, dia mahatsapa fa mpanota aho. Mino aho fa maty noho ianao ny fahotako. I hanaiky anao ho Mpamonjy ahy. Amin'ny anaran'i Jesosy, Amena."
I mangataka ny fitahiana anao sy ianareo rehetra izay tonga ho amin'ny famonjena ny fahalalana an'i Jesosy.
Manantena ny hihaona aminareo any an-danitra.
Ny fitiavana in Kristus❣️
Izany no mpamaky iray mailaka, ka ny fomba fijery ny mpanoratra manokana.